आज श्री शाके १९४१ बि.स.२०७६ साल चैत्र १ गते शनिबार इश्वी सन २०२० मार्च १४ तारीख चैत्र कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथी विशाखा नक्षत्र हर्षण योग गर करण चन्द्रमा तुला राशिमा१२ः३८ बजे सम्म पश्चात बृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा शुभ योग परिधावीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु,चैत्रसंक्रान्ति –
काठमाडौं । केही महिना अघि भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको बजाज पल्सर १२५ को नेपाली बजारमा बुकिङ खुल्ला भएको छ । अबको केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बजाज पल्सर १२५ को बुकिङ खुल्ला गरेको हो ।बजाज मोटरसाइकलका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक एचएच बजाजले नेपालमा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको उपचार खर्च ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका ओलीको अनुमानित उपचार खर्च ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमकृष्ण खड्गाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीको डिस्चार्ज पछि पत्रकारहरुसँग
काठमाडौं, फागुन ३० । सरकारले मोबाइल एपमार्फत भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्दै
काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले ठूला जमघट हुने सामाजिक कार्य
काठमाडौं । मन्त्रीहरुको कामप्रति जनस्तरबाट निकै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी
मिस वर्ल्ड–२०२० नेपालमा होला ?
आँचलको हातमा उदीपको मेहेन्दी !
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुस् फागुन ३०…
पाथिभरा माताले सबैको क,ल्याण ग,रुँन ! – हेर्नुस् फागुन २९…
के नोटबाट स र्छ कोरोना भा इरस? यसो भन्छन् चि कित्सक
एजेन्सी । कोरोना भा इरसको प्रकोप बढ्दै जाँदा केही समयअघि चिनियाँ बैंकहरुले नोट धुनुका साथै तिनलाई सं क्रमणरहित बनाएका थिए। तर नोटबाट भा इरस सर्न कति सम्भव छ त? जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीस्थित सेन्टर फर हेल्थ सेक्युरिटीका वरिष्ठ विद्वान डा. अमेश अदल्जा भने नोटबाट सर्ने भाइरसप्रति धेरै चिन्तित नहुन आग्रह गर्छन्। ‘यो श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भा इरस हो। त्यसैले […]